ဖက်ရှင်ဘုရင်မအဖြစ် တင်စားခံရတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရွှေခေတ်က အအောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီး - For her Myanmar
အခုခေတ်နဲ့ကြည့်ရင်တောင် အထာကျနေဆဲ ဖက်ရှင်တွေပါနော်
တစ်ခေတ်တစ်ခါက ဟောလီးဝုဒ်အကြောင်းကို ပြောကြမယ်ဆိုရင် မင်းသမီး Audrey Hepburn ကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ တစ်နေကုန် တစိမ့်စိမ့် ထိုင်ကြည့်မိတဲ့အထိ လှပလွန်းလှတဲ့ မင်းသမီးကို ပြပါဆိုရင် အက်ဒ်မင်ကတော့ Audrey Hepburn ကို ပြမိမှာပါပဲ။
သူမဟာ ဟောလီးဝုဒ်ရွှေခေတ်ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလို ညို့အားပြင်းတဲ့ သူမရဲ့ဖက်ရှင်ကြောင့် ဖက်ရှင်ဘုရင်မလို့လည်း ခုထိတင်စားခံနေရပါတယ်။
သူမအလှက ကျက်သရေရှိတဲ့အလှကော ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှကော ပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ နတ်မိမယ်လေး Audrey Hepburn အကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့….
Audrey Hepburn ကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး မတိုင်ခင် ၁၉၂၉ခုနှစ် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးမိခင်ဟာ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ သူကောင်းမျိုးရိုးဘွဲ့ ချီးမြင့်ခံရသူ Baroness ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ချမ်းသာတဲ့ မျိုးရိုးအမြင့်စားကနေလာတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ စစ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ Audrey ဟာ သူများတွေလိုပဲ အသက်ရှင်ကျန်အောင် ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ စစ်အတွင်းမှာ စားစရာပြတ်တောက်သွားလို့ သူမတို့ မိသားစုဟာ ခြံထဲက ကျူးလစ်ပန်းဖူးတွေစားပြီး အသက်ရှင်လာခဲ့ရတာပါ။ သတ္တိရှိတဲ့ Audreyဟာ နာဇီတွေကို ပြန်လည်ခုခံရေး လှုပ်ရှားမှုမှာလည်း “သတင်းပို့သူ” အဖြစ် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးလည်းပြီး အခြေအနေတွေလည်း တည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါ Audrey ဟာ သူမရဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းကို သေချာအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အကပိုးပါတဲ့ သူမဟာ Amsterdam နဲ့ Londonမှာ ဘဲလေးအကကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် သင်ယူခဲ့ပါတယ်။
Audreyဟာ Londonမြို့က ပြဇာတ်တစ်ခုမှာ chorous ပိုင်းကို ဆိုရ ၊ ကရတဲ့ မိန်းကလေးအဖြစ် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး ပြဇာတ်တော်တော်များများမှာ မထင်မရှားကဏ္ဍကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာတော့ ရုပ်ရှင်လောကထဲ ခြေလှမ်းလာခဲ့ပြီး ၁၉၅၁မှာ One Wild Oat ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကားမှာ မထင်မရှားနေရာကနေ ပါရတာမို့ သူမကို လူတွေက သတိမထားမိသေးပါဘူး။
သူမ အသက်၂၂နှစ်မှာတော့ Broadway က ဂီတပြဇာတ်တွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ရလာတာမို့ သူမကို အမေရိကန်ပရိတ်သတ်တွေက သတိထားမိလာပါတယ်။ နှစ်နှစ်လောက် ကြာတဲ့အခါ၊ ၁၉၅၃ခုနှစ်မှာတော့ သူမဟာ မင်းသား Gregory Pack နဲ့ The Roman Holiday ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့အခါ ချက်ချင်းဆိုသလို နာမည်ကြီးသွားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲက တော်ဝင်မင်းသမီး ကာရိုက်တာကို အလွန်ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာမို့ ပရိသတ်တွေရော ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကပါ Audrey ကို သဘောကျသွားပြီး အံ့ဩချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ သူမဟာ ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု ကို ရခဲ့ပါတယ်။
Audrey ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်တွေကတော့ Breakfast at Tiffany’s , My Fair Lady, Roman Holiday, Sabrina, War and Peace, Charade စတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေပါပဲ။ IMDB Rating တွေရှယ်မြင့်တာနော်။
Breakfast at Tiffany’s ရုပ်ရှင်နဲ့ Audreyဟာ ဖက်ရှင်ဘုရင်မလို့ တင်စားခံခဲ့ရပြီး ဟောလီးဝုဒ်ရဲ့ ဖက်ရှင်စံနှုန်းတွေကိုပါ ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ အချိန်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ အမြဲတမ်းခေတ်မီစတိုင်ကျနေတဲ့ သူမရဲ့ဝတ်စားပုံကြောင့် International Best Dressed list ဆိုတဲ့ အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပုဒ်စာရင်းထဲ ပါခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အက်ဒ်မင်တို့ဆီမှာတော့ Marilyn Monroe က အတော်နာမည်ကြီးပေမယ့် ဟောလီးဝုဒ်လောကနဲ့ ရုပ်ရှင်အတတ်ပညာပိုင်းမှာ Audrey Hepburn က ပိုအောင်မြင်ပြီး ပိုထူးချွန်ပါတယ်။
Audrey Hepburn ဟာ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်အသင်းကြီးက ပြုစုတဲ့ ” ဟောလီးဝုဒ်ရွှေခေတ်၏ အကျော်ဇောဆုံး အနုပညာရှင်၅၀” စာရင်းမှာ နံပါတ်၃ ချိတ်ခဲ့တဲ့ထိ ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။
Audrey ဟာ Tony, Emmy, Grammy, Academy ဆိုတဲ့ လူနည်းစုလောက်သာ ရဖူးတဲ့ဆုတွေကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရှားပါးမင်းသမီးတစ်လက်လည်း ဖြစ်သလို အကယ်ဒမီဆု၊ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု နဲ့ BAFTA ဆုကို ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးမင်းသမီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမမှာ အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်နဲ့ ပါတနာတစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ Audrey ဟာ သူမနဲ့ ရုပ်ရှင်တူတူရိုက်ရင်း ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ Mal Ferrer နဲ့ ၁၉၅၄ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသားတစ်ယောက် ရခဲ့ပါတယ်။
Ferrer နဲ့ မင်္ဂလာဆောင် စဉ် က
၁၉၆၈ခုနှစ်ခုနှစ်မှာ ကွာရှင်းလိုက်ပြီး ၁၉၆၉ခုနှစ်မှာတော့ Andrea Dotti ဆိုတဲ့ အီတာလျံစိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်နဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။
သားလေးတစ်ယောက် ထပ်ရခဲ့ပြီး ၁၉၈၂ခုနှစ်မှာ ကွာရှင်းလိုက်ပါတယ်။
Audrey ဟာ အသက်ရလာတဲ့အခါ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကိုလျှော့ပြီး UNICEF က ခန့်အပ်တဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုသာ အချိန်ပေးအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၈ကနေ ၁၉၉၂အထိ အဆင်းရဲဆုံး အာဖရိက၊ အာရှ ဒေသတွေမှာ ကလေးတွေအတွက် စေတနာဝန်ထမ်း လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ခုနှစ်မှာတော့ ဆွစ်ဇာလန်က သူမရဲ့ နေအိမ်မှာပဲ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်သွားရှာပါတယ်။
သူမသေဆုံးချိန်မှာ ၆၃နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၈၀ခုနှစ်တည်းက အတူနေလာတဲ့ Robert Wolders ဆိုတဲ့ ချစ်သူကတော့ Audrey သေဆုံးချိန်ထိ သူမအနားမှာ ရှိပေးခဲ့ပါတယ်။
reference links: biography.com IMDb.com
အခုခတျေနဲ့ကွညျ့ရငျတောငျ အထာကနြဆေဲ ဖကျရှငျတှပေါနျော
တဈခတျေတဈခါက ဟောလီးဝုဒျအကွောငျးကို ပွောကွမယျဆိုရငျ မငျးသမီး Audrey Hepburn ကို မထေ့ားလို့မရပါဘူး။ တနကေုနျ တစိမျ့စိမျ့ ထိုငျကွညျ့မိတဲ့အထိ လှပလှနျးလှတဲ့ မငျးသမီးကို ပွပါဆိုရငျ အကျဒျမငျကတော့ Audrey Hepburn ကို ပွမိမှာပါပဲ။
သူမဟာ ဟောလီးဝုဒျရှခေတျေရဲ့ အအောငျမွငျဆုံး မငျးသမီးတဈလကျဖွဈသလို ညို့အားပွငျးတဲ့ သူမရဲ့ဖကျရှငျကွောငျ့ ဖကျရှငျဘုရငျမလို့လညျး ခုထိတငျစားခံနရေပါတယျ။
သူမအလှက ကကျြသရရှေိတဲ့အလှကော ညို့အားပွငျးတဲ့ အလှကော ပေါငျးစပျထားတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ နတျမိမယျလေး Audrey Hepburn အကွောငျးကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့….
Audrey Hepburn ကို ဒုတိယကမ်ဘာစဈကွီး မတိုငျခငျ ၁၉၂၉ခုနှဈ ဘယျလျဂြီယံနိုငျငံမှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ ဒတျချြလူမြိုးမိခငျဟာ တျောဝငျမိသားစုရဲ့ သူကောငျးမြိုးရိုးဘှဲ့ ခြီးမွငျ့ခံရသူ Baroness ဖွဈပါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ခမျြးသာတဲ့ မြိုးရိုးအမွငျ့စားကနလောတာပေါ့။
ဒါပမေဲ့ စဈကွီးဖွဈတဲ့အခါမှာတော့ Audrey ဟာ သူမြားတှလေိုပဲ အသကျရှငျကနျြအောငျ ရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။ စဈအတှငျးမှာ စားစရာပွတျတောကျသှားလို့ သူမတို့ မိသားစုဟာ ခွံထဲက ကြူးလဈပနျးဖူးတှစေားပွီး အသကျရှငျလာခဲ့ရတာပါ။ သတ်တိရှိတဲ့ Audreyဟာ နာဇီတှကေို ပွနျလညျခုခံရေး လှုပျရှားမှုမှာလညျး “သတငျးပို့သူ” အဖွဈ တဈတပျတဈအား ပါဝငျခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒုတိယကမ်ဘာစဈကွီးလညျးပွီး အခွအေနတှေလေညျး တညျငွိမျသှားတဲ့အခါ Audrey ဟာ သူမရဲ့ အနုပညာလမျးကွောငျးကို သခြောအာရုံစိုကျခဲ့ပါတယျ။ အကပိုးပါတဲ့ သူမဟာ Amsterdam နဲ့ Londonမှာ ဘဲလေးအကကို ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျအောငျ သငျယူခဲ့ပါတယျ။
Audreyဟာ Londonမွို့က ပွဇာတျတဈခုမှာ chorous ပိုငျးကို ဆိုရ ၊ ကရတဲ့ မိနျးကလေးအဖွဈ ပှဲဦးထှကျခဲ့ပွီး ပွဇာတျတျောတျောမြားမြားမှာ မထငျမရှားကဏ်ဍကနေ ပါဝငျသရုပျဆောငျလာပါတယျ။
အဲ့နောကျမှာတော့ ရုပျရှငျလောကထဲ ခွလှေမျးလာခဲ့ပွီး ၁၉၅၁မှာ One Wild Oat ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျနဲ့ ပထမဆုံး ပှဲဦးထှကျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီကားမှာ မထငျမရှားနရောကနေ ပါရတာမို့ သူမကို လူတှကေ သတိမထားမိသေးပါဘူး။
သူမ အသကျ၂၂နှဈမှာတော့ Broadway က ဂီတပွဇာတျတှမှော ပါဝငျခှငျ့ရလာတာမို့ သူမကို အမရေိကနျပရိတျသတျတှကေ သတိထားမိလာပါတယျ။ နှဈနှဈလောကျ ကွာတဲ့အခါ၊ ၁၉၅၃ခုနှဈမှာတော့ သူမဟာ မငျးသား Gregory Pack နဲ့ The Roman Holiday ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျကို ရိုကျကူးလိုကျတဲ့အခါ ခကျြခငျြးဆိုသလို နာမညျကွီးသှားပါတယျ။
ရုပျရှငျထဲက တျောဝငျမငျးသမီး ကာရိုကျတာကို အလှနျပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာမို့ ပရိတျသတျတှရေော ဝဖေနျရေးဆရာတှကေပါ Audrey ကို သဘောကသြှားပွီး အံ့ဩခြီးကြူးခဲ့ကွပါတယျ။ သူမဟာ ဒီရုပျရှငျနဲ့ အကောငျးဆုံး အမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆု ကို ရခဲ့ပါတယျ။
Audrey ရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးရုပျရှငျတှကေတော့ Breakfast at Tiffany’s , My Fair Lady, Roman Holiday, Sabrina, War and Peace, Charade စတဲ့ ရုပျရှငျတှပေါပဲ။ IMDB Rating တှရှေယျမွငျ့တာနျော။
Breakfast at Tiffany’s ရုပျရှငျနဲ့ Audreyဟာ ဖကျရှငျဘုရငျမလို့ တငျစားခံခဲ့ရပွီး ဟောလီးဝုဒျရဲ့ ဖကျရှငျစံနှုနျးတှကေိုပါ ပွောငျးလဲပဈခဲ့ပါတယျ။
သူမဟာ အခြိနျတှဘေယျလောကျကွာကွာ အမွဲတမျးခတျေမှီစတိုငျကနြတေဲ့ သူမရဲ့ဝတျစားပုံကွောငျ့ International Best Dressed list ဆိုတဲ့ အမွငျ့ဆုံးဂုဏျပုဒျစာရငျးထဲ ပါခဲ့တဲ့ မငျးသမီးလညျး ဖွဈပါတယျ။
အကျဒျမငျတို့ဆီမှာတော့ Marilyn Monroe က အတျောနာမညျကွီးပမေယျ့ ဟောလီးဝုဒျလောကနဲ့ ရုပျရှငျအတတျပညာပိုငျးမှာ Audrey Hepburn က ပိုအောငျမွငျပွီး ပိုထူးခြှနျပါတယျ။
Audrey Hepburn ဟာ အမရေိကနျရုပျရှငျအသငျးကွီးက ပွုစုတဲ့ ” ဟောလီးဝုဒျရှခေတျေ၏ အကြျောဇောဆုံး အနုပညာရှငျ၅၀” စာရငျးမှာ နံပါတျ၃ ခြိတျခဲ့တဲ့ထိ ကြျောကွားခဲ့ပါတယျ။
Audrey ဟာ Tony, Emmy, Grammy, Academy ဆိုတဲ့ လူနညျးစုလောကျသာ ရဖူးတဲ့ဆုတှကေို သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ ရှားပါးမငျးသမီးတဈလကျလညျး ဖွဈသလို အကယျဒမီဆု၊ ရှကေမ်ဘာလုံးဆု နဲ့ BAFTA ဆုကို ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးမငျးသမီးလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမမှာ အိမျထောငျနှဈဆကျနဲ့ ပါတနာတဈယောကျ ရှိခဲ့ပါတယျ။ Audrey ဟာ သူမနဲ့ ရုပျရှငျတူတူရိုကျရငျး ခဈြကြှမျးဝငျခဲ့တဲ့ Mal Ferrer နဲ့ ၁၉၅၄ခုနှဈမှာ လကျထပျခဲ့ပွီးသားတဈယောကျ ရခဲ့ပါတယျ။
Ferrer နဲ့ မင်ျဂလာဆောငျ စဉျ က
၁၉၆၈ခုနှဈခုနှဈမှာ ကှာရှငျးလိုကျပွီး ၁၉၆၉ခုနှဈမှာတော့ Andrea Dotti ဆိုတဲ့ အီတာလြံစိတျရောဂါကု ဆရာဝနျနဲ့ နောကျအိမျထောငျပွုခဲ့ပါတယျ။
သားလေးတဈယောကျ ထပျရခဲ့ပွီး ၁၉၈၂ခုနှဈမှာ ကှာရှငျးလိုကျပါတယျ။
Audrey ဟာ အသကျရလာတဲ့အခါ ရုပျရှငျရိုကျတာကိုလြှော့ပွီး UNICEF က ခနျ့အပျတဲ့ စတေနာ့ဝနျထမျးအလုပျကိုသာ အခြိနျပေးအာရုံစိုကျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၈၈ကနေ ၁၉၉၂အထိ အဆငျးရဲဆုံး အာဖရိက၊ အာရှ ဒသေတှမှော ကလေးတှအေတှကျ စတေနာဝနျထမျး လုပျခဲ့ပွီး ၁၉၉၃ခုနှဈမှာတော့ ဆှဈဇာလနျက သူမရဲ့ နအေိမျမှာပဲ ကငျဆာရောဂါကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားရှာပါတယျ။
သူမသဆေုံးခြိနျမှာ ၆၃နှဈပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ၁၉၈၀ခုနှဈတညျးက အတူနလောတဲ့ Robert Wolders ဆိုတဲ့ ခဈြသူကတော့ Audrey သဆေုံးခြိနျထိ သူမအနားမှာ ရှိပေးခဲ့ပါတယျ။
Tags: #biography #celebrity
Aye Mon Kyaw April 4, 2019